Kaarka Amaahda ee Chase ee La Ansixiyay
U qalmida hore iyo ansixinta Hore. Maxay ku kala duwan yihiin?
Kaadhadhka Chase-ka ee aad hore ugu sii ansixin kartaa?
Sida Bathroom Helo Hore Loogu Ogolaaday Kaararka Amaahda ee Chase
Sida Bathroom-Hor-mariyo Kaararka Deynta ee Chase
Tani ma Saameyn doontaa Deyntayda?
Sida Bathroom Kordhiyo Fursadahaaga U-qalmitaanka Hore iyo Oggolaanshaha Kaarka Deynta ee Chase
Kuwa suuqa ugu jira Kaarka amaahda ee Chase Preapproved Card, buuxinta arjiga weydiinaya haddii laguu oggolaan doono waxay noqon kartaa dareen-celin. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira hal dariiqo oo kor loogu qaadi karo fursadahaaga oggolaanshaha kaarka Chase. Sii akhri si aad wax badan u baratid
Chase waxay bixisaa qaar ka mid ah abaalmarinnada ugu sarreeya iyo kaararka amaahda safarka ee suuqa maanta, laakiin daruuri maahan inay u -qalmitaanku noqoto hawl fudud.
Dhammaan kaararka deynta ee Chase waxay u baahan yihiin sumcad wanaagsan ama aad u fiican si ay u bilaabaan, Chase sidoo kale waxay leedahay a xukun kaas oo xaddidaya kaararka amaahda cusub ee macaamiisha ay u aragto inay aad u badan yihiin – xeerka Chase 5/24.
U -qalmitaanka waa marka aad bixiso macluumaadkaaga deynta ka hor intaadan dalban kaarka deynta si aad u ogaato fursadahaaga oggolaanshaha.
Oggolaanshaha hore waa marka bangigu go’aamiyo u -qalmitaankaaga si aad u hesho kaarka amaahda adigoon codsan.
Haddii aad hore u oggolaatay ama aad u qalantay Chase, qasab kuguma aha inaad dalbato.
Websaytka Chase ayaa isla markiiba u muuqda mid kaararka deynta ah ee aad hore ugu qalmi karto internetka. Kaararka amaahda sare ee Chase ee aad ka hubin karto u-qalmitaanka hore waxaa ka mid ah Kaarka Safafka Most well-liked®, Chase Freedom® iyo Chase Slate®.
Meesha kaarka Chase Sapphire Most well-liked® Card uu ku habboon yahay macaamiisha doonaya inay kasbadaan abaalmarinno socdaal oo dabacsan, Chase Freedom® waxay ku habboon tahay qof kasta oo doonaya inuu kasbado lacag caddaan ah oo aan lahayn khidmadda sannadlaha ah.
See also Cuando compra un _, ¿está prestando dinero a una organización?
Dhanka kale, Chase Slate®, waxay u oggolaanaysaa macaamiisha inay ka faa’iidaystaan ​​hordhaca APR ee iibsashada iyo wareejinta dheelitirka muddo 15 bilood ah iyada oo aan la bixin khidmadaha wareejinta dheelitirka ee wareejinta la bilaabay 60 -ka maalmood ee ugu horreeya furitaanka akoonka.
Taasi waxay ka dhigeysaa mid ku habboon isku -darka deynta, ama qof kasta oo doonaya inuu wax weyn iibsado oo uu bixiyo waqti ka dib.
Method adag tahay in la helo kaarka deynta Chase ka hor oggolaanshaha marka bathroom eego u qalmidda ka hor, oo in badan oo ka mid ah waxay ku dhacdaa nasiib. Waxaa jira laba siyaabood oo macaamiisha bathroom sii oggolaado:
Habka koowaad waa mid ku habboon marka ay adiga kugu dhacdo, laakiin dhab ahaan maahan wax aad awood u leedahay inaad xakameyso, haddaba aan xoogga saarno kan labaad.
Markaad booqato laanta Chase, waxaad weydiin kartaa shaqaale haddii horay bathroom ansixiyay kaararka deynta. Waxay badanaa caawisaa inaad yeelato koonto bangi ama xiriir kale oo horay u jiray oo la leh Chase.
Haddii shaqaaluhu kuu helo oggolaansho hore oo aad xiisaynayso, waxaad u baahan doontaa inaad ka dalbato laanta si aad uga faa’iidaysato dalabka.
Waad arki kartaa haddii aad hore ugu qalantay mid kasta oo kaararka Chase onlayn ah.
1. Tag meesha Chase bogga u qalmidda kahor.
2. Buuxi foomka u-qalmitaanka kahor macluumaadka bathroom baahan yahay.
3. Foomkan kaliya ayaa lagu weydiinayaa:
• Magacaaga oo buuxa
• Cinwaankaaga jidka
4. Afarta lambar ee ugu dambeeya lambarkaaga Sooshiyaal Sikiyuuriti
5. Guji “Raadi Dalabyadayda.”
Kadib socodsiinta macluumaadkaaga, goobtu waxay ku tusi doontaa kaararka Chase ee aad hore ugu qalantay. Haddii aadan hore u-qalmin midna, markaas bogga ayaa oran doona “Ma awoodno inaan kuu helno wax dalabyo ah waqtigan.”
Akhri: Kaararka ugu Fiican Chase ee Safarada, Ganacsiyada iyo Lacag celinta
See also Which option best completes the diagram?
Maya, wax saamayn ah kuma yeelanayso dhibcahaaga dhibcaha inta lagu jiro ansixinta hore ama habka u-qalmitaanka kahor. Chase kaliya waxay ku samaynaysaa jeegga deynta jilicsan marka aad isticmaaleyso aaladdeeda u qalmidda kahor, taasina ma saamaynayso dhibcahaaga dhibcaha.
Haddii aad go’aansato inaad dalbato kaarka Chase, waxaa jiri doona hubin deyn oo adag taas. Jeegaga amaahda adag ayaa sababa dhibcaha dhibcaha, laakiin ma badna – hoos udhaca celceliska ayaa ah ilaa saddex ilaa shan dhibcood.
Sideed u kordhin kartaa fursadahaaga oggolaanshaha haddii aad qaaddo tallaabooyin aad ku buuxinayso codsi oo aad dalbanayso? Waxaa jira dhowr tallaabo oo aad isla markiiba qaadi karto:
Haddii dhibcahaaga FICO ay ku dhacaan nooc kasta oo aan ahayn mid aad u wanaagsan ama aad u fiican, oo sida caadiga ah macnaheedu yahay dhibco kasta oo ka hooseeya 740, markaa waxaa suurtagal ah inaad u baahan tahay inaad waqti ku bixiso hagaajinta deyntaada ka hor intaadan u qalmin kaarka deynta Chase.
Si aad u aragto meesha aad u taagan tahay hubi, hubi inaad hubiso dhibcaha dhibcahaaga.
Bixinta dhammaan biilashaada goor hore ama waqtigii loogu talagalay
Sababtoo ah taariikhda lacag-bixintaadu waa qodobka ugu muhiimsan ee go’aamiya dhibcahaaga FICO, bixinta dhammaan biilashaada wakhti hore ama waqtigeeda ayaa ah hab caqli-gal ah si bathroom hubiyo in dhibcaha dhibcahaagu uu ahaado mid wanaagsan.
Bixinta deynta kale
Qodobka labaad ee ugu muhiimsan ee ka kooban dhibcahaaga FICO waa adeegsiga amaahdaada ama qaddarka lagugu leeyahay ee la xiriira xadkaaga deynta. Haddii heerarka deyntaadu ay sarreeyaan, waxaa laga yaabaa inaad awood u yeelato inaad sare u qaaddo dhibcahaaga deynta adoo bixinaya deyn kale.
Khubarada badankood waxay soo jeedinayaan in isticmaalka deyntaada ay ka hooseyso 30 boqolkiiba natiijooyinka ugu wanaagsan, taas oo macnaheedu yahay in lagu hayo $ 3,000 ama ka yar deynta $ 10,000 kasta oo ku noqoshada deynta aad leedahay.
See also YOUR AGE ON OTHER WORLDS
Tiri Dakhliga Qoyskaaga
The Xafiiska Ilaalinta Maaliyadda Macmiilka (CFPB) waxay soo saartay xeerar u oggolaanaya shakhsiyaadka inay taxaan dakhliga qoyska marka ay codsanayaan deyn, taas oo wax u tari karta xaaska guriga jooga ama aan shaqayn laakiin galaangal u leh dakhli haddii kale.
Iyadoo taas maanka lagu hayo, hubi inaad ku qoreyso dakhliga qoyskaaga arjiga kaarka deynta haddii aad dalbato, oo ma aha kaliya dakhligaaga shaqsiyeed.
Sug it baxay
Ugu dambayn, xusuusnow inaadan u badnayn inaad u oggolaato kaarka deynta cusub ee Chase haddii aad lahayd kaarar deyn oo cusub oo aad u badan waqtiyadii la soo dhaafay.
Haddii aad haysatay in ka badan shan kaar oo cusub 24 -kii bilood ee la soo dhaafay, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad sugto hal sano ama ka badan si aad dib ugu codsato kaarka deynta Chase ee aad rabto.
Sidoo kale Akhri: Kaarka Amaahda ee U-Qalmitaanka Ugu Fiican wuxuu Bixiyaa Cusbooneysiinta 2020.
U gudub websaydhka u -qalmitaanka ee Chase si aad sawir fiican uga hesho meesha aad taagan tahay. Waxaa jiri doona jiido jilicsan oo ku saabsan taariikhdaada deynta, sidaa darteed deyntaada ma saameyn doonto. Dhowr ilbidhiqsi gudahood, waxaad arki doontaa kaadhadhka aad u qalantay.
Kuma qasbanid inaad dalbato mid ka mid ah kaararka, markaa ha ka baqin inaad ka dukaameysato bixiyeyaasha kale. Waxaad u qalmi kartaa badeecada saxda ah American Specific, USAA ama bangi kale.
Waxaan rajeyneynaa tan article ayaa wax kuu taray. Fadlan la wadaag cidkasta oo aad u maleyneyso inuu qadarin doono macluumaadka!
What’s the difference between chain dimensioning and datum dimensioning?
Is Jolene a biblical name?
The Possible Disadvantages of Beard Oils:
Walmart Return Policy Without Receipt In 2021 (Full Guide)